इन्टरनेटमा पो’र्न फिल्म हेर्दै थिए, आफ्नै श्रीमतीलाई देखेपछि……. – Jagaran Nepal
इन्टरनेटमा पो’र्न फिल्म हेर्दै थिए, आफ्नै श्रीमतीलाई देखेपछि…….
Homeइन्टरनेटमा पो’र्न फिल्म हेर्दै थिए, आफ्नै श्रीमतीलाई देखेपछि…….
May 25, 2020 AdminLeave A CommentOn इन्टरनेटमा पो’र्न फिल्म हेर्दै थिए, आफ्नै श्रीमतीलाई देखेपछि…….
एक व्यक्तिले घरमै बसेर अनलाइनमा ए’डल्ट फिल्म हेर्दै थिए कि अचानक उनको हो श उड्यो, उनले त्यस भिडियोमा जुन महिला अर्कै पुरुषसँग सम्बन्ध बनाइरहेकी थिइन् उनी उनकी पत्नी थिइन् । यो भिडियो देखेपछि उनले श्रीमतीलाई छोडिदिए । महिला डाक्टर हुन् भने पति सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन् ।
महिला अक्सर पतिलाई पो’र्न फिल्म हेर्न द’बाब दिन्थिन् । पतिले पनि उनको कुरा मानेर पो’र्न हेर्न थालेका थिए
आज तकको समाचार अनुसार दुवै बैंगलोरमा बस्थे । पति ३३ वर्षका र पत्नी ३२ वर्षकी छिन् । पति उत्तरु प्रदेशका र महिला कोलकाताकी हुन् । यी दुईको एक मेट्रिमोनीयल साइटमार्फत भेट भएपछि उनीहरुले २०१८ मा बिहे गरेका थिए । महिलाले बिहेभन्दा पहिले आफ्नो एक व्यक्तिसँग स’म्बन्ध रहेको बताएकी थिइन् ।
उनले ती व्यक्तिसँग आफ्नो ब्रे’कअप भइसकेको बताएकी थिइन् । दुवैको स’म्बन्ध राम्रो चलिरहेको थियो । तर, महिला अक्सर पतिलाई पो’र्न फिल्म हेर्न द’बाब दिन्थिन् । पतिले पनि उनको कुरा मानेर पो’र्न हेर्न थालेका थिए । यही क्रममा एकपटक पहिले पनि उनले श्रीमतीकै पो’र्न भिडियो भेटेका थिए ।
बिहेभन्दा अगाडि आफूले धेरै पुरुषसँग स’म्बन्ध बनाइसकेको बताइन् । यो सुनेपछि रि’साएका रदुखी पति उनलाई छोडेर एक्लै बस्न थाले
यो भिडियोमा पुरुष पनि अर्कै थिए । यो देखेपछि पतिले यसबारे सोध्दा उनले बिहेभन्दा अगाडि आफूले धेरै पुरुषसँग स’म्बन्ध बनाइसकेको बताइन् । यो सुनेपछि रि’साएका रदुखी पति उनलाई छोडेर एक्लै बस्न थाले । महिलाले पतिलाई फर्काउन यो केस पुलिस कमिश्नर अफिसको फ्यामिली काउन्सिलिङ सेन्टरमा पुर्याएकी छिन् ।
महिला आफ्ना पति फर्किउन् भन्ने चाहन्छिन् तर पतिले भने उनीसँग बस्न नसक्ने बताएका छन् ।